महानर्तक जोडी - परिहास - नेपाल
महानगर हुन के–के चाहिन्छ ? धेरैथोक चाहिएला । त्यसमध्ये अपरिहार्य हो, मनोरञ्जनका साधन । ताकि, महानगरवासीले ‘बोर’ अनुभूत गर्न नपाऊन् । आखिर जनताले बोर मान्न थाले भने विकासको के अर्थ ? त्यही भएर अब महानगरमा पब, डान्स बार पर्याप्त हुनुपर्‍यो । महानगर मदहोस बनोस् भनेरै भर्खरै निर्वाचित काठमाडौँ महानगरका मेयर र उपमेयरले रानीपोखरीमा पुगेर नृत्य रिहर्सलको सुरुवात गरेका छन्, भाकभुक र पाकपुक शैलीको । रानीपोखरी पुन:निर्माणको पावन साइतमा उनीहरुले यस्तो लोभलाग्दो नाच देखाए । यो हिपहप डान्स कम्ती रमाइलो थिएन । अहिले उनीहरु एक्लाएक्लै नाचेकाले दर्शकलाई केही अलिनो भएको छ । बरु, अब उनीहरुले चाँडै रानीपोखरी डान्सबार स्थापना गरेर यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । जहाँ विद्यासुन्दर र हरिप्रभाको जोडीले यस्ता थुप्रै नाच चहकिलो स्वादमा प्रदर्शन गरोस् । त्यसपछि संसारभरका पर्यटक यहीँ नओइरिने कुरै छैन ।
अग्रिम शुभकामना !